सल्यान, रोल्पा र कन्चनपुरमा नेकपा बिजयी हुँदा, उपनिर्वाचनमा काग्रेसको खाता खुलेन ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/सल्यान, रोल्पा र कन्चनपुरमा नेकपा बिजयी हुँदा, उपनिर्वाचनमा काग्रेसको खाता खुलेन !
सल्यान, रोल्पा र कन्चनपुरमा नेकपा बिजयी हुँदा, उपनिर्वाचनमा काग्रेसको खाता खुलेन !
सल्यानको कुमाख गाउपालिका वडा नम्बर ५ मा कांग्रेसलाइ पराजित गर्दै नेकपाका धर्मे बुढाथोकी ज्वाला बिजयी भएका छन् । उनले ७९२ मत प्राप्त गरि बिजयी भएका हुन । कांग्रेसका खड्क बहादुर बोहराले २५१ मत ल्याएका थिए भने राप्रपाका गोपाल शाह -२१ मत प्राप्त गरेका थिए ।
कुमाख गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष हरिप्रकाश बुढाथोकी जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख भएसँगै वडाअध्यक्ष पदरिक्त रहेको थियो । रिक्तपदमा नेकपाको तर्फबाट धर्मे बुढाथोकी ‘ज्वाला’ लाई उम्मेदवार नेकपाले बनाएको थियो ।
त्यस्तै कन्चनपुर को पुनर्वास नपा वडा न ३ मा नेकपाका कृष्ण बहादुर तामाङ बिजयी भएका छन् उनले कांग्रेसका दीप बहादुर तामाङलाइ हराउँदै बिजयी भएका हुन ।
खसेको मतको कुल ५० प्रतिसत भन्दा बढी मत ल्याई बिजयी भएका हुन । नेकपाका कृष्ण बहादुर तामाङको ५२८ र कांग्रेसका दीप बहादुर तामाङको ३१० को अन्तर रहेको थियो । यस ओडामा ११९९ मतदाता रहेकोमा खसेको मत थियो तर सदर मत ९२० रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै थबाङमा गाउँपालिका–१को उपनिर्वाचनमा नेकपा विजयी भएको छ । नेकपाका वडाअध्यक्ष उम्मेदवार जनकबहादुर बुढा एक सय ७४ मतसहित विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका कलम रोकाले २६ मत ल्याएका छन् । २०९ मत खसेकोमा ९ मत बदर भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत रमेशप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए।
थवाङमा १६.४ प्रतिशत मात्र खसेको थिो । १ हजार २७४ मतदाता रहेको १ नम्बर वडामा २ सय ९ मात्र मत खसेको हो । १ सय १२ पुरुष र ९७ महिला मतदाताले मत दिए। पन्चायतदेखि कहिले शून्य मतदान हुने त कहिले शत प्रतिशत मतदान हुने यहाँ यसपटक न्यून मत खसेको हो।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको आस्थावान मतदाताले मतदानमा भाग नलिएपछि न्यून मतदान भएको छ। उनीहरुले मतदान नगर्न घर–घरमा भेटघाट गरेको बुझिएको छ। चुनावको दिन विप्लव नेतृत्वको नेकपाको आस्थावान नेता कार्यकर्ता मतदानस्थल वरिपरि आएका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस : उपनिर्वाचनमा ६५ दशमलव ४३ प्रतिशत मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान
प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको आज भएको उपनिर्वाचनमा ६५ दशमलव ४३ प्रतिशत मत खसेको छ ।
खर्पनाथ गाउँपालिका बाहेक सबै मतपेटिका आजै राति ११ बजेसम्म मतगणनास्थलमा पु¥याइसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आगमी १२ घण्टाभित्र ५० प्रतिशतको नतिजा सार्वजनिक भइसक्ने अनुमान गरिएको छ ।–
कतै जाँदै हुनुहुन्छ ? आज दिनभर यी रुटमा सवारीसाधन चलाउन मिल्दैन